तगडा भएर फर्किए प्रधानमन्त्री ओली : सक्रियता दोब्बर | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more तगडा भएर फर्किए प्रधानमन्त्री ओली : सक्रियता दोब्बर
तगडा भएर फर्किए प्रधानमन्त्री ओली : सक्रियता दोब्बर अर्का अध्यक्ष प्रचण्डसँगमात्रै तीन दिनमा आधा दर्जनपटक छलफल
भदौ २४ गते, २०७६ - ०९:३५
काठमाडौं । स्वास्थ्योपचारका लागि १५ दिन सिंगापुरमा बिताएका प्रधानमन्त्री तथा सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष नेपाल फर्केपछि पनि उत्तिकै तन्दुरुस्तीका साथ दैनिक भेटघाटमा सरिक भइरहेका छन् ।
डाक्टरले आराम गर्न दिएको सुझाव विपरित प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो सक्रियता व्हात्तै बढाएका छन् । २० गते सिंगापुरबाट फर्किएका ओलीको स्वास्थ्यस्थिति कमजोर रहेको छ ।
गत २० गते शुक्रवार नेपाल फर्किएलगत्तै प्रधानमन्त्री ओलीले बालुवाटारमै बसेर राजनीतिक भेटघाट तीव्र पारेका छन् । सोमवारमात्रै ओलीसँग चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले एक घण्टा भन्दा बढी समय भेटवार्ता गरेका थिए ।
पार्टीको एकीकरण प्रक्रिया पूरा भइसकेको छैन भने सरकारविरुद्ध जनताको आवाज बढ्दो छ । ओली आफैं पनि कतिपय मन्त्रीहरूको काममा सन्तुष्ट छैनन् । पार्टी भित्रैका नेताहरूले सरकार परिणाममुखी नभएको भन्दै आलोचना गरिरहेका छन् । यसअघि अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनका विषयमा पटकपटक छलफल हुने गर्थ्यो । तर अहिले त्यो विषय सेलाएको देखिन्छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीको सम्भावित कदमका रूपमा मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनको विषय पनि छ । तर त्यसका लागि निर्णय मात्र गरिदिएर पुग्दैन । पार्टीभित्र ठूलो छलफल हुन जरुरी छ । यसले ओलीको शारीरिक स्वास्थ्यलाई असर त पार्ने नै छ, थप मानसिक तनाव पनि दिनेछ ।
प्रधानमन्त्री ओली फर्किए लगत्तै नेकपाभित्र राजनीतिक सरगर्मी पनि बढेको छ । पछिल्ला चार दिनमा अध्यक्षद्वयबीचका भेटघाट सामान्य भन्दा बढी भइरहेका छन् । प्रचण्ड निकट स्रोतका अनुसार यसबीचमा दुई अध्यक्षबीच करीब आधा दर्जन पटक भेट भए । भेटघाटमा के छलफल भए भन्ने विषय अहिलेसम्म बाहिर आएको छैन । यसबाट नेकपामा ठूलै केही हुँदैछ भन्ने अनुमान लगाउनेहरूको कमी छैन ।
सिंगापुरबाट फर्केको दिन नै पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल र पार्टी महासचिव विष्णु पौडेलसँग सरकार र पार्टीका कामबारे ओलीले परामर्श तथा छलफल गरेका थिए । ओलीले महासचिव पौडेलसँग त शनिबार र आइबार पनि लामै छलफल गरे । शनिबार बेलुकी अर्का अध्यक्ष प्रचण्डसँग पार्टीको अबको रणनीतिबारे लामो छलफल गरेका थिए । प्रचण्डसँगको छलफल आइतवार र सोमवार पनि चल्यो ।
ठूलै निर्णय हुनसक्ने सम्भावना छ ?
प्रधानमन्त्री ओली निकट एक नेताले प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी र सरकार दुवैका सन्दर्भमा केही न केही निर्णय लिन सक्ने बताउँछन् ।
‘प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षका रूपमा उहाँको अहिले ठूलो जिम्मेवारी देखिएको छ,’ उनले भने,– ‘सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको गठन गर्नु छ, संसदमा विचाराधीन विधेयकहरूका सन्दर्भमा कुनै न कुनै निर्णय लिनुपर्ने छ, पार्टी एकताका सम्पूर्ण काम पूरा भएका छैनन्, स्थायी र केन्द्रीय कमिटिको बैठक बोलाउन माग भइरहेको छ । यी कामहरूको सन्दर्भमा उहाँले कुनै न कुनै रूपमा ठोस कदम चाल्न सक्नुहुनेछ ।’
मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनका सवालमा भने प्रधानमन्त्री ओलीले अहिल्यै केही नसोचेको उनको दाबी छ । उनले उल्लेख गरेका कामहरू प्रधानमन्त्री सिंगापुर जानुभन्दा पहिला नै पटक(पटक छलफलमा आएका विषय भएपनि कुनै निष्कर्षमा पुग्न सकेका विषय थिएनन् ।
प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले आगामी बुधवार या बिहीवार सचिवालय बैठक बस्न सक्ने सम्भावना औंल्याएको छ । सोही बैठकबाट पार्टी एकताका सम्पूर्ण कामहरू पूरा हुनेछन्,’ स्रोतले भन्यो, –‘त्यसपछि आफूले सरकारमात्र हेर्ने र प्रचण्ड कमरेडलाई पार्टी हेर्ने जिम्मेवारी दिने गरी कार्यविभाजन हुने सम्भावना छ ।’
यद्यपि प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यक्ष पद भने छोड्ने सम्भावना कम देखिन्छ । कार्यविभाजनमा आन्तरिक सहमति गर्ने तर महाधिवेशनसम्म प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष पद दुवै छोड्न ओलीले चाहेका छैनन् ।
कसको अध्यक्षतामा पार्टीको बैठक बस्ला ?
प्रधानमन्त्री ओली सिंगापुरमा उपचार गराइरहेका बेला यता अध्यक्ष प्रचण्डले आफ्नो अध्यक्षतामा बस्ने गरी सचिवालय बैठक बोलाए । बैठकबाट केही महत्त्वपूर्ण निर्णय पनि गराए ।
तर प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो स्वास्थ्यको चिन्ताभन्दा पनि प्रचण्डको सक्रियताको चिन्ता बढी लिए भनेर उनीमाथि आरोप लाग्यो । आफू उपचार गरेर स्वस्थ भइसकेपछि सिंगापुरमा प्रस्तावित उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र महासचिवलाई बोलाएर ब्रिफिङ लिनुलाई साविक माओवादी नेताहरुले राम्रो मानेका छैनन् ।
प्रचण्डमाथि दवाव बनाउने रणनीति स्वरूप ओलीले वामदेव गौतमलाई अघि सारेको बुझ्न कठीन छैन । तर वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई रिझाएर प्रचण्डले आफूमाथि आउने अवरोधको हल निकालिसकेका छन् ।
‘अबको सचिवालय बैठक प्रचण्डको अध्यक्षतामा बस्ने सम्भावना निकै कम छ,’ प्रचण्डनिकट एक नेताले बताए, ‘यसअघि पनि एकताका बेलामा भएको सहमतिलाई पालना नगरिकन सबै बैठकहरू कमरेड ओलीकै अध्यक्षतामा बसे । अब पनि ओलीले प्रचण्डलाई बैठकको अध्यक्षता गर्न दिने सम्भावना न्यून छ ।’
यद्यपि दुई अध्यक्षहरू निरन्तर संवादमा भएकाले सहमतिमै सबै कुराको निकास निस्कने उनले दाबी गरे ।
प्रधानमन्त्री ओली कति स्वस्थ ?
१२ वर्षअघि मृगौला प्रत्यारोपण गरेका प्रधानमन्त्री ओलीको स्वास्थ्य अवस्थाबारे आम जनतालाई ठूलो चासो रहेको छ । कतिपय मृगौला रोग विशेषज्ञले मृगौला प्रत्यारोपणपछि कति वर्ष आयु हुन्छ भनेर यकिनका साथ भन्न नसकिने बताउँछन् । चिकित्सक पुकारचन्द्र श्रेष्ठ एक कुराकानीका क्रममा आफूले मृगौला प्रत्यारोपण गरेको व्यक्ति ४३ वर्षसम्म स्वस्थ रहेको देखेको उदाहरण दिए ।
प्रधानमन्त्रीको निजि चिकित्सक डाक्टर दिव्या सिंहले शुक्रवार नै एक विज्ञप्ति निकालेर प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य सामान्य रहेको जानकारी दिइन् । तर आम जनता त्यतिले मात्र विश्वस्त छैनन् ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सांसद गगन थापाले त प्रतिनिधि सभा बैठकमै प्रधानमन्त्रीले अब विश्राम लिनुपर्ने र नेकपाबाट अर्को कोही प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने धारणा नै सार्वजनिक गरिसकेका छन् ।
मृगौला प्रत्यारोपण गर्ने जो कोहीले पनि शरीरको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता घट्ने औषधि खानुपर्छ । डाक्टरहरूका अनुसार शरीरको रोग प्रतिरोधात्मक संयन्त्रले बाह्य अंगलाई स्वीकार्दैन । १२ वर्षसम्म निरन्तर औषधि खाएपछि प्रधानमन्त्रीको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता थप कम हुन नसक्ने गरी तल्लो विन्दुमा झरेको थियो । रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता नभएपछि सामान्य संक्रमणले पनि ठूलै चुनौती निम्त्याउन सक्छ ।
रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता थप कम हुन नसकेपछि र मृगौला प्रत्यारोपणको समय बढ्दै गएपछि प्रधानमन्त्री ओलीको शरीरमा थप स्वास्थ्य चुनौती देखा पर्यो । त्यसपछि सिंगापुरमा ‘प्लाज्मा फेरोसिस’ गर्नुपर्ने अवस्था आएको डाक्टरहरू बताउँछन् । प्लाज्मा फेरोसिस भनेको रगतमा रहेका प्लाज्मालाई हटाउने प्रक्रिया हो ।
रगतमा रहेको प्लाज्माले रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बोक्ने काम गर्छ । प्लाज्मा नै हटाइदिएपछि रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता थप कमजोर बन्ने भयो जुन मृगौला प्रत्यारोपण गरेका प्रधानमन्त्री ओलीको शरीरलाई आवश्यक थियो ।
भदौ २४ गते, २०७६ - ०९:३५ मा प्रकाशित